Haweeney taliyaani ah oo Al-Shabaab afduub u heysteen oo lasoo furtay - Awdinle Online
Haweeney taliyaani ah oo Al-Shabaab afduub u heysteen oo lasoo furtay
May 09, 2020 (Awdinle Online) – Silvia Constanca Romano, oo aheyd samafale bishii November ee sanadkii 2018 laga soo afduubtay dalka Kenya, laguna haystay Soomaaliya, ayaa lasoo furtay.
Ra’iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ku shaaciyey sii furashada Silvia, isaga oo u mahad-celiyey sirdoonka dalka Talyaaniga.
“Silvia Romano waa lasoo daayey. Waxaan u mahad-celinayaa ragga iyo haweenka sirdoonka dibadda. Silvia, waxaan kugu sugaynaa Italia,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Conte.
Wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Luigi Di Maio, oo sidoo kale ku dhowaaqay xoreynta Silvia ayaa yiri “Dowladda marnaba meel cidlo ah ugama tagto qofna.” Wargeyska La Repubblica ee Talyaaniya ayaa qoray in sii deysmada Silvia ay muddo ka shaqeynaysay Hay’adda Sirdoonka Dibadda iyo Amniga Talyaaniga, ayaga oo ay kala shaqeeyeen sirdoonka Soomaaliya iyo Turkiga.
Silvia ayaa waxaa heystay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya oo kasoo qafaalatay deegaanka Chakama County ee dalka Kenya, bishii November ee sanadkii 2018-kii.
Waxaa haweeneydan lagu soo furtay howl-gal xalay ka dhacay meel 30 KM u jirta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kaasi oo ay fuliyeen ciidamada sirdoonka Aise, waxayna hadda ay ku sugan tahay Muqdisho.
Silvia ayaa la filayaa in maalinta Axadda ah ee berri ay u duusho dalkeedii Talyaaniga, sida aan xogta ku helnay. “Waxaan ahaa qof xooggan, waan iska caabiyey, waan fiicanahay mana sugi karo inaan dalkayga kusoo laabto,” ayey tiri Silvia.
Previous articleItalian PM says kidnapped volunteer Silvia Romano freed
Next articleDanjirihii Soomaaliya u fadhiyay Masar iyo Jaamacadda Carabta oo Geeriyoodey